Fianarana avy amin'ny Semalta: Inona no tombony azon'ireo manam-pahaizana momba ny varotra nomena ho an'ny varotra e-commerce?
Ny maso ivoho marketing rehetra dia tokony ho afaka hanampy ny orinasanao e-varotra hitombohaingana rehefa manamaivana ny olana rehetra mety ho azonao. Mazava ho azy fa maniry ny hitombo ny orinasany ny orinasan'ny orinasa tsirairay, ka mamokatra bebe kokoany fivarotana ary ny hahatongavana any amin'ny toeran'ny mpitarika ao amin'ny orinasa sasany.
Miharihary fa mila fanampiana ianao indraindray - free reporting tool for mysql tutorial. Famoahana mpivarotra dizitalyNy maso ivoho dia tokony ho toerana tsara hanombohana. Jason Adler, mpitantana ny Customer Success of Semalt manazava ny tombontsoa 8 azonao raha raisinao ireo manam-pahaizana momba ny dizitaly.
Ny sampan-draharaha ara-barotra mahazatra dia miezaka amin'ny famoronana, fividianana ary fandaminanafifamoivoizana any amin'izay misy azy. Nahoana izy ireo no tsara? Noho izany antony efatra izany:
Experience. Manana traikefa goavana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa isan-karazany,ny masoivohon'ny varotra anao dia nahita fampielezan-kevitra am-polony maro.
Fandaminana. Hahazo tatitra amin'ny antsipiriany momba ny habetsaky ny vola lanin'ny tetikasa
Faharetan'ny fotoana. Manokàna fotoana tena sarobidy amin'ny famelana azy ireo handamina ilayny lafiny ara-barotra amin'ny orinasa raha toa ka mamaritra ny zavatra hafa rehetra.
ara-toekarena. Satria efa nividy dokam-barotra marobe talohan'nyny fandraisana anjaranao, dia mety hahazo tombony kokoa ry zareo (ireo sampana).
Tahaka ny manondro ny anarana, ny fivarotana votoaty dia manodidina ny famoronana sary, horonan-tsaryary lahatsoratra avy eo dia nizara azy ireo amin'ny tanjon'ny fampisehoana, fanangonana sy famadihana ireo mpidoroka amin'ny mpanjifa. Any amin'ny tontolo misy ankehitrinyNy votoatin'ny fampiroboroboana dia ampiasaina amin'ny tanjona handrodana ny mpividy, ny vokatra an-tserasera dia mampisy vidiny. Ny anjara asan'ny marketingserivisy mba hamoronana votoaty vaovao, mahafinaritra ary mahafinaritra ho anao.
Ity teknikam-barotra ity dia tsy tena ampiasaina amin'ny orinasaNy sampan-draharaha misahana ny varotra iraisam-pirenena izay azonao dia azo antoka fa hahasoa anao. Ataovy fotsiny ny lisitr'ireo zavatra tokony hatao sy ny anaoNy fahafahana misafidy dia hitantana izany ho anao.
Fitantanana ny media sosialy
Zava-mahazatra ho an'ny orinasam-pandraharahana ireo pejy media sosialy - pejy Facebook iray, aYouTube, kaonty Google+ na Twitter. Ny fampandrenesana ireo pejy ireo tsy tapaka dia aretin'andoha, izay azo atao handresenany fanampian'ny sampan-draharaha momba ny varotra.
Ny mpandraharaha mikasa ny hanao raharaham-barotra noho ny antony maro. Ny sasany manao izany noho izanyAfaka izy ireo, ary ny hafa dia manao izany noho ny antony hafa rehetra. Mampalahelo fa tsy ny olona rehetra no mahay mamorona ny tranokalany manokanafomba fijery tsara ho an'ny fisian'ny aterineto (tranonkala). Raha vao vaovao vao haingana ianao, dia tokony hanampy anao ny sampana.
Sary & sary
Ny horonan-tsary sy ny sary dia tena zava-dehibe amin'ny fivarotana fitaovana an-tserasera.Eritrereto ny tranga iray izay tsy ahitan'ny mpisera iray ny fomba fijery ny vokatra iray - ny sary na ny lahatsary dia tokony ho tonga lafatra.Izany dia ho tanteraka tsara amin'ny sampan-draharaham-barotra mahomby.
Fanatsarana ny fihenan'ny varotra (CRO)
Misy masoivoho marobe an-jatony izay manolotra CRO. Ity (CRO)miankina amin'ny fanandramana sy ny fanangonana tahiry hanovana ny votoatin'ny tranonkala izay niova ho fitarihana. CRO dia teknika amin'ny natiora, noho izanymitaky fahaizana matihanina tokony hatao.
Rehefa mitombo ny orinasa dia tsy maintsy manana olana maro ianao. FaRaha ohatra ka miteraka fivarotana bebe kokoa ianao dia mahazo andraikitra bebe kokoa amin'ny birao. Miaraka amin'ny tsipika mahazatra vokatra kokoa dia mahazo tahiry maromaro kokoa ianaokeep track. Apetraho amin'ny maro ny safidin'ny dokam-barotra ,Ny vaovao momba ny SEO, fitaovam-pandraharahana momba ny media sosialy ary hahazo ny sary misimisy kokoa.